प्रश्न: दौडले मेरो साइकल चलाउन मद्दत गर्नेछ - BikeHike
के दौडले साइकल चलाउने प्रदर्शनमा असर गर्छ?
के साइकल चालकहरू दौडनु पर्छ?
साइकल यात्रीले कति दौडनु पर्छ?
मैले साइकल चलाउनु अघि वा पछि दौडनु पर्छ?
के म एकै दिन दौड्न र साइकल चलाउन सक्छु?
साइकल यात्री किन दौडन सक्दैनन् ?
साइकल चलाएपछि दौडन किन गाह्रो हुन्छ?
के साइकल चलाएर दौडनु नराम्रो हो?
स्ट्यामिनाका लागि साइकल चलाउनु वा दौडनु राम्रो हो?
साइकलले मेरो शरीरलाई कसरी परिवर्तन गर्नेछ?
कसरत पछि साइकल चलाउनु राम्रो हो?
राम्रो कसरतको लागि मैले कति लामो बाइक चलाउनु पर्छ?
के साइकल चालकहरू धावकहरू भन्दा फिट छन्?
के एक दिन साइकल को 30 मिनेट पर्याप्त छ?
के तपाइँ साइकल चलाएर पेटको बोसो गुमाउन सक्नुहुन्छ?
के बाइकिङ भन्दा दौडन गाह्रो छ?
के VO2 अधिकतमको लागि साइकल चलाउनु वा दौडनु राम्रो हो?
के एक5मिनेट माइल एक बाइक मा राम्रो छ?
के बाइकिङले तपाईंलाई ढिलो धावक बनाउँछ?
के दौडने र साइकल चलाउँदा एउटै मांसपेशी प्रयोग हुन्छ?
दौडनु भन्दा साइकल चलाउनु किन सजिलो लाग्छ?
के बाइकिङले तपाईंको बट ठूलो बनाउँछ?
के बाइकिङले तपाईंको खुट्टा ठूलो बनाउँछ?
के यो दौड र साइकल संयोजन गर्न राम्रो छ?
के बाइकिङले तपाईंलाई abs दिन सक्छ?
पहिले बाइक चलाउनु राम्रो हो कि चलाउनु राम्रो हो?
कति माइल बाइकिङ दौडन बराबर हुन्छ?
साइकल र दौडको लागि मैले कसरी तालिम लिनुपर्छ?
दौडनु भन्दा बाइक चलाउन गाह्रो छ?
कार्डियोभास्कुलर, मांसपेशी बल र व्यायाम सहनशीलता बढ्यो। ठूलो हड्डीको घनत्वको अतिरिक्त, क्रस-प्रशिक्षण व्यायामको रूपमा दौडले साइकल चालकको लागि पूर्ण रूपमा फरक एरोबिक अनुभव प्रदान गर्न सक्छ, जसले क्षमता र मांसपेशी सहनशीलता बढाउँछ।
जब तपाइँ दौडिरहनु भएको छ, मांसपेशी फाइबरको क्षति जुन तपाईले बाइक चलाउँदा हुने क्षति भन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। यसरी, दुई घण्टाको एरोबिक दौड सत्र तपाईको शरीरको लागि बाइकमा दुई घण्टाको एरोबिक प्रशिक्षण सत्र भन्दा धेरै ठूलो तनाव हुनेछ।
सिजनको छोटो अन्त्यको विश्राम पछि, तपाइँको शीतकालीन फिटनेस शासनमा दौडनु समावेश गर्नुहोस्। तालिमको 'सामान्य कन्डिसनिङ' चरणको दौडान तपाईं कति लामो समयसम्म फिट रहनुहुन्छ भन्ने कुराले खासै फरक पार्दैन, र यसरी दौडले तपाईंको साइकल चलाउन मद्दत गर्न सक्छ।
तपाईंले अर्को दिन ठूलो पीडा महसुस नगरी 30 मिनेट आरामसँग दौडने क्षमतामा काम गर्नुपर्छ। दौडमा शरीरको सहनशीलतालाई असर गर्ने केही कारकहरू समावेश छन्: समय (प्रशिक्षणमा खर्च गरिएको कुल समय) विधि (प्रयोग गरिएको प्रशिक्षणका प्रकारहरू)।
छोटो जवाफ जुन सबैले खोजिरहेका छन् संकुचित हुन सक्छ। यदि तपाइँ मांसपेशी निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने, पहिले दौड्नुहोस्। यदि तपाईं आफ्नो सहनशीलता र एरोबिक क्षमता निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने, अन्तिम दौड्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा, तपाईंको शरीरको अनुकूली प्रतिक्रिया व्यायामको प्रकारको लागि ठूलो हुन्छ जुन तपाईंले आफ्नो कसरत समाप्त गर्नुहुन्छ।
केवल ध्यान दिनुहोस् कि यो मांसपेशी भन्दा ठूलो कार्डियो लाभ हुनेछ। एउटै दिनमा दुवै काम गर्दा राम्रो हुनुपर्छ जबसम्म तपाईं आफैलाई पर्याप्त रिकभरी दिँदै हुनुहुन्छ।
साइकल चलाउँदा मांसपेशीहरू बनाउँछ जुन तपाईंले दौडमा धेरै प्रयोग गर्नुहुन्न, यसरी क्र्याम्प र चोटपटकहरू रोक्न, र दौडले मांसपेशीहरू बनाउँछ जुन प्राय साइकलमा प्रयोग हुँदैन, अर्थात् ह्यामस्ट्रिङहरू। दुबैले तपाईको कार्डियोमा योगदान पुर्‍याउँछ, तर मलाई लाग्छ कि दौड्दा तपाईले साइकल चलाउन सक्नुहुने भन्दा धेरै छोटो कसरत (कार्डियो-वार) बाट टाढा जान सक्नुहुन्छ।
बिन्दु भनेको तपाइँ साइकल चलाउनबाट खेल्न आउने मांसपेशिहरु लाई दौडन मा ट्रान्जिसन गर्दा नयाँ गति र उनीहरु मा राखिएको तनाव को लागी समय चाहिन्छ। यही कारणले गर्दा तपाइँ प्राय: दौडको पहिलो दुई हप्ताको लागि दुखाइ हुनुहुन्छ, र तपाइँको स्ट्राइड / दौडने फारम धेरै अप्रभावी महसुस गर्दछ।
प्रशिक्षण मा, तपाईं एक विकल्प छ। सबैजना सहमत छन् कि ट्रयाथलीटहरूले दौडहरूमा उस्तै गर्नको लागि तयारी गरेर केही बाइक राइडहरू पछि दौडनु पर्छ, तर त्यहाँ पनि एक सहमति छ कि प्रत्येक सवारी पछि दौडनु आवश्यक छैन।
साइकल कम प्रभाव पार्ने खेल हो जसले सहनशीलता र स्ट्यामिना निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। दौडको तुलनामा, साइकल चलाउँदा स्ट्यामिना निर्माण गर्न र कायम राख्न सजिलो हुन्छ किनभने कम प्रभावको कारण मांसपेशी दुखाइ र क्षति ढिलो हुन्छ।
तौल व्यवस्थापन बानीमा, विशेष गरी उच्च तीव्रतामा साइकल चलाउँदा, शरीरको बोसोको स्तर कम गर्न मद्दत गर्दछ, जसले स्वस्थ तौल व्यवस्थापनलाई बढावा दिन्छ। साथै, तपाईंले आफ्नो मेटाबोलिज्म बढाउनुहुनेछ र मांसपेशीहरू निर्माण गर्नुहुनेछ, जसले तपाईंलाई आराम गर्दा पनि थप क्यालोरीहरू जलाउन अनुमति दिन्छ।
दौड आउँदा पहिले सवारी गर्नुहोस्। "जब साइकल चलाउने कसरत तपाईंको प्राथमिकता हो, तपाईंको अन्य कसरतहरूले तपाईंको साइकल चलाउने लाभहरूलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ," ह्यामन्ड भन्छन्। यसको मतलब- तपाईंले अनुमान गर्नुभयो- तपाईंले पहिले सवारी गर्नुपर्छ यदि तपाईंलाई आफ्नो कार्डियो र शक्ति सत्रहरू एकै दिनमा गर्न आवश्यक छ।
तपाईंको बाइकमा चढ्ने योजना बनाउनुहोस् र 30-60 मिनेट, हप्ताको 3-5 दिन सवारी गर्नुहोस्। प्रत्येक सवारीलाई वार्म-अपको साथ सुरु गर्नुहोस्। 5-10 मिनेटको लागि ढिलो, सजिलो गतिमा पेडल गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाइँको गति बढाउनुहोस् ताकि तपाइँ पसिना सुरु गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ उही समयको लागि दौडनुभयो र साइकल चलाउनुभयो भने, दौडने ठूलो क्यालोरी बर्नर साबित हुनेछ। तपाईं साइकल चलाउँदा तल बसिरहनु भएको छ, आखिर। एक साइकल यात्रीले यात्राको प्रति चरण लगभग 3,500-4,500 क्यालोरीहरू (सामान्यतया लगभग पाँच वा छ घण्टा) जलाउँछ, जबकि एक म्याराथोनरले एकल दौडमा लगभग 3,000 जलाउँछ।
दिनमा कम्तिमा ३० मिनेट बाइकमा व्यायाम गर्नाले तपाईंको हृदय र मांसपेशी सहनशीलता बढ्छ। तपाईंले दिनभर उच्च ऊर्जा स्तरहरू पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने व्यायामले तपाईंको समग्र सहनशक्ति बढाउन मद्दत गर्दछ।
हो, साइकल चलाएर पेटको बोसो घटाउन मद्दत गर्छ, तर यसले समय लिन्छ। भर्खरैको अध्ययनले नियमित साइकल चलाउँदा समग्र बोसो घटाउन र स्वस्थ तौल बढाउन सक्छ। समग्र पेटको घेरा कम गर्न, मध्यम-तीव्रताको एरोबिक अभ्यासहरू, जस्तै साइकल चलाउने (इनडोर वा बाहिर), पेटको बोसो कम गर्न प्रभावकारी हुन्छ।
दौड र साइकल चलाउने क्लासिक शौक र व्यायामहरू हुन् जुन संसारभरका मानिसहरूले रमाइलो गर्छन्। सामान्यतया, साइकल चलाउनु भन्दा दौडले धेरै क्यालोरीहरू जलाउँछ। तर यसले मांसपेशी र जोडहरूमा उच्च प्रभाव र कठिन पनि छ।
तपाईंको कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस (VO2 अधिकतम) सुधार हुँदा, समान संख्याको वाट उत्पादन गर्न तपाईंको आन्तरिक कार्यभार क्षमताको कम प्रतिशत आवश्यक छ। यदि तपाईं एक सक्रिय साइकल चालक र धावक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि तपाईंसँग साइकल चलाउनको लागि एक VO2 अधिकतम र दौडको लागि समान तर थोरै फरक VO2 अधिकतम मूल्य छ।
एक माइल साइकल चलाउनको लागि औसत समय तीन देखि चार मिनेट छ। 17 देखि 18 माइल प्रतिघण्टा भनेको एक स्वस्थ व्यक्तिले समतल र इलाकामा राम्रो गुणस्तरको बाइकको साथ साइकल चलाउने औसत साइकल गति हो।
बाइक चलाउँदा छिटो दौडन मद्दत गर्दैन। छिटो धावक बन्नको लागि, तपाईंले दौडिएर तालिम लिनुपर्छ। तपाइँको प्रशिक्षण आहारमा साइकल थप्नुले तपाइँलाई छिटो दौडने समयहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दैन, यद्यपि यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गरिएको खण्डमा प्रभावकारी क्रस-ट्रेनिङ उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
दौडने र साइकल चलाउन दुवैमा क्वाड्रिसेप्स र ह्यामस्ट्रिङहरू, माथिल्लो र पछाडिको तिघ्राको मांसपेशीहरू प्रयोग हुन्छन्। तपाईंका क्वाडहरूले दौडँदा वा साइकल चलाउँदा पेडल घुमाउँदा खुट्टालाई स्ट्राइडको लागि उठाउँछन्, जबकि तपाईंको ह्यामस्ट्रिङले खुट्टालाई तल तान्छ। जब तपाइँ दौडिरहनु भएको छ, तपाइँको तिघ्राको मांसपेशिहरु प्राथमिक मांसपेशिहरु हुन्।
अनिवार्य रूपमा, जब तपाईंका खुट्टाहरू हिड्न वा दौडन आवश्यक भन्दा धेरै बलियो हुन्छन्, यसले अझै पनि साइकल चलाउने भन्दा बढी मांसपेशिहरु प्रयोग गर्दछ। साइकलहरूले निस्सन्देह, 'कोस्ट' (जस्तै डाउनहिलमा सवारी गर्दा) गर्न सक्छ, जसले तपाईंलाई उच्च स्तरको शारीरिक प्रयास कायम नगरी निरन्तर गतिमा गति दिन सक्षम बनाउँछ।
साइकलले तपाईंलाई ठूलो बट प्रदान गर्दैन, तर यसले कार्डियो र मांसपेशी निर्माण गर्ने फाइदाहरूको कारणले तपाईंलाई अझ सुडौल दिन सक्छ। यद्यपि, यदि तपाइँ चुनौतीपूर्ण गति र प्रतिरोधमा नियमित रूपमा सवारी गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ सम्भवतः बलियो टश देख्नुहुनेछ - र कम हिप, घुँडा र खुट्टाको दुखाइ सहित यससँग जाने स्वास्थ्य लाभहरू।
साइकल चलाउँदा तपाईको खुट्टा ठुलो बनाउने हो कि होइन भन्ने छोटो जवाफ हो - होइन। निस्सन्देह, साइकल चलाउँदा तपाईंको खुट्टाको मांसपेशीहरू सुधार हुन्छ, तर एरोबिक व्यायामको रूपमा, यसले तपाईंको सहनशीलताको मांसपेशी फाइबरलाई काम गर्छ, उनीहरूलाई तालिमको क्रममा थकानको प्रतिरोधी बनाउँछ, तर तिनीहरूलाई बल्क अप गर्न दिँदैन।
कार्यसम्पादनमा सुधार गर्दै साइकल चलाउनुले तपाईंको खुट्टाको मांसपेशीलाई हानी नगरी फिटनेस, स्ट्यामिना र सहनशीलताको विकास गरेर दौडने कार्यसम्पादन सुधार गर्न मद्दत गर्छ। यो एक ठूलो कम प्रभाव कार्डियोभास्कुलर कसरत पनि हो र यसलाई तपाइँको साप्ताहिक प्रशिक्षण प्रणालीमा थपेर तपाइँको शरीरमा कम तनाव संग धेरै गर्न मद्दत गर्नेछ।
साइकल चलाउनुले तपाईंको एब्स सीधै बनाउँदैन, तर यसले उचित आहार र केही अतिरिक्त व्यायामसँग जोडिएको खण्डमा तपाईंको एब्स प्रकट गर्न मद्दत गर्न सक्छ। बाइक चलाउँदा तपाईंको एब्स कभर गर्ने बोसोलाई टुक्रा पार्न मद्दत गर्छ।
दौडले बाइकिङ भन्दा बढी क्यालोरीहरू जलाउँछ र मांसपेशी टोन गर्नको लागि पनि भरपर्दो छ, त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा, यसले तपाईंको फिटनेसलाई अझ सुधार गर्न सक्छ। दुबै गतिविधिहरूबाट धेरै भन्दा धेरै प्राप्त गर्न, पहिले बाइक राइड लिनुहोस् र त्यसपछि दौडनुहोस्, तपाईंले पहिले सुरु गर्दा तपाईंले बाइक चलाउनु भएको माइलेजको 10 प्रतिशत भन्दा बढीमा सीमित नगर्नुहोस्।
सामान्य नियम भनेको १:३ वा १:२ रन टु बाइक रेसियो माइलमा हो। अर्को शब्दमा, मध्यम स्तरमा 1 माइलको दौड उस्तै प्रयास स्तरमा 3-1 माइल बाइकिङको बराबर हो। दौड एक उच्च प्रभाव गतिविधि हो र सम्पूर्ण शरीर चल्न आवश्यक छ।
रमाइलो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण योजनामा ​​साइकल चलाउने र दौडलाई मिलाउन यहाँ तीनवटा तरिकाहरू छन्: दौडमा कडा तालिम दिनुहोस् र बाइकमा पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्। यदि तपाईं एक धावक हुनुहुन्छ जसले लामो दौड, स्पीडवर्क, टेम्पो रन, र हिल वर्कआउटहरू सहित कडा-प्रयास वर्कआउटहरू सहित प्रशिक्षण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले साप्ताहिक रूपमा दुईवटा सजिलो-प्रयास साइकल कसरतहरूमा बुन्न सक्नुहुन्छ।
यो धेरै तीव्र छ - तपाइँको जोर्नी र मांसपेशिहरु एक दौड को समयमा धेरै कडा काम गर्न को लागी छ। बाइकमा, तपाईंको शरीरको तौल काठीले समर्थन गर्दछ र तपाईंको बाइकले तपाईंलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ। मेरो लागि, यो बाइकमा कम्तिमा दुई घण्टाको एक घण्टाको दौड बराबर हो जस्तो लाग्छ।
के साइकल चलाउन मद्दत गर्छ
प्रश्न: के साइकल चलाउन मद्दत गर्छ
दौडले साइकल चलाउने सहनशीलतालाई मद्दत गर्छ
द्रुत उत्तर: के साइकल चलाउन मद्दत गर्छ Reddit
दौडले तपाईंको साइकल चलाउन मद्दत गर्छ
द्रुत उत्तर: के साइकल चलाउन मद्दत गर्छ
दौडले रोड साइकल चलाउन मद्दत गर्छ
द्रुत उत्तर: के साइकल चलाउने फिटनेस संग मद्दत गर्छ
के इनडोर साइकल चलाउन मद्दत गर्दछ
साइकलले तपाईंलाई छिटो दौड्न मद्दत गर्न सक्छ
प्रश्न: के साइकलले तपाईंलाई राम्रोसँग दौडन मद्दत गर्छ
द्रुत उत्तर: के साइकलले तपाईंलाई छिटो दौडन मद्दत गर्छ